Noah Centineo နဲ့ Lana Condor တို့ အပြင်မှာတကယ်ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာလား?🤔 – Trend.com.mm
Noah Centineo နဲ့ Lana Condor တို့ အပြင်မှာတကယ်ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာလား?🤔
Posted on August 28, 2018 August 28, 2018 by Noel
Netflix ရဲ့ To All the Boys I’ve Loved Before (၂၀၁၈) ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်း နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ချင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်းလက်ခံကြမှာပါ။လူငယ်ဆန်ဆန်အချစ်ဒရာမာဇာတ်ကားလေးဖြစ်လို့ ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်လည်းမရိုးနိုင်ပါဘူး။ဒီကြားထဲ မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကလည်း နှစ်ယောက်လုံး လိုက်ဖက်ပြီးချစ်စရာကောင်းသူလေးတွေ။ဒီတော့ ပရိသတ်တွေက Ship ပြီပေါ့။သူတို့အတွဲလေးကိုသဘောကျလို့ ပရိသတ်တစ်ချို့က သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အပြင်မှာတကယ်ဒိတ်နေကြတယ်လို့ထင်ရလောက်တဲ့သက်သေတွေကိုရှာခဲ့ပါတယ်တဲ့။အယ့်လယ် 🤭
Peter K & Lara Jean 💌🎬#toalltheboysivelovedbefore
A post shared by @ lanacondor on Jul 22, 2017 at 12:30pm PDT
*ဒီဓာတ်ပုံထဲက Lara Jean ရဲ့ lock-screen လေးကိုမြင်ရင် ဟယ် ဒီအခန်းလေးမတွေ့လိုက်ဘူး၊ကျော်သွားတာထင်တယ်လို့တွေးမိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ဒါက ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါရိုက်တာ Susan Johnson ပြောပြတဲ့ ချစ်စရာအဖြစ်အပျက်လေးကတော့ “သူတို့နှစ်ယောက်က အထက်တန်းကျောင်းသဖွယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ပြီး အိပ်ပျော်နေကြတာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ အဖွဲ့သားတစ်ယောက်က သူတို့ပုံလေးကိုရိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအခုလိုတွေ့ရတာ တကယ်ပဲလိုက်ဖက်ပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်”ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
*ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့တစ်ချိန်လုံး Noah က Lana Condor ကို ကျီစယ်နေတာပါတဲ့။ရုပ်ရှင်ထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်စတွဲတဲ့အချိန် Lara ရဲ့ ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲကိုလက်ထည့်ပြီး ကန်တင်းကိုလျှောက်လာကြတဲ့အခန်းကိုမှတ်မိကြဦးမှာပါ။တကယ်တော့ အဲ့ဒါက Noah (peter) ကြောင့်ပါ။သူက အဲ့ဒါကို အစမ်းရိုက်နေတုန်းကျီစယ်စနောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို ဒါရိုက်တာက သဘောကျကာ မိုက်တယ်ဆိုပြီး သူတို့အစက ရိုက်မယ့်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုပြောင်းလဲခဲ့တာပါ။
*PRESS TOUR မှာလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကျီစယ်နောက်ပြောင်ခဲ့ကြတာပါ။Third Wheel ကတော့ Israel Broussard ပေါ့ 😝။ဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ပါဦး။
*Lana ကလည်း Noah ရဲ့ PICKUP LINES တွေနဲ့ အတော်ကြီးကြည်နူးနေတာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒိတ်ဖို့အတွက် စကားလမ်းကြောင်းခင်းတဲ့ပုံစံမျိုးNoah နဲ့ Israel က Lana ကိုပြောတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ Lana က Noah ရဲ့ စကားတွေကို ပိုပြီးသဘောကျတာ မြင်နေရပါတယ်။Noah ရဲ့ 
“Do I know you? You lookalot like my next girlfriend.”ဆိုတဲ့စကားကြားတော့ ချက်ချင်းကိုအမှတ် ၁၀၀ပေးလိုက်တာနော်။Israel လေး သနားပါတယ် 🤭😅
*နောက်တစ်ချက်က Lana Condor ဟာ Naoh ကို အရပ်ရှည်ပြီး ခန့်ညားချောမောတဲ့ယောက်ျားလေးလို့ အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့”သူက အမြဲတမ်းပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး စိတ်သဘောထားကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ဒီတော့ သူ့ရဲ့တွဲဖက်မင်းသမီးအဖြစ်လုပ်ဖို့ မခက်ခဲပါဘူး။သူ့ကို တကယ်ကြီးအကြီးကြီး ခရက်ရ်ှနေတာပါ။ပြီးတော့ သူလည်း ကျွန်မကိုခရက်ရ်ှနေတယ်လို့တွေးရတာလည်းကြိုက်ပါတယ်”ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးတော့ Noah ကလည်း Lana ကို “love of his life” လို့ခေါ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောနေတာလည်းမရပ်တော့ပါဘူးတဲ့။ကဲ ဘယ်သူက သူတို့ကို မ Ship ချင်ပဲနေမလဲ 💕
How am I supposed to not ship Lana Condor with Noah Centineo when he says shit like this?!!! pic.twitter.com/wKDRFleA6a
— 𝐦 (@purposesheaven) August 19, 2018
*နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အင်စတာဂရမ်နောက်ခံဘက်ဂရောင်းကလည်းအတူတူပါပဲ။ဆင်တူပေါ့။ပြီးတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မန်းရှင်းခေါ်ပြီးကျီစယ်နေကြတာ ခဏခဏတွေ့နေရပါတယ်။
noah centineo and lana condor stop playing me like this pic.twitter.com/vRJfDl5Im3
— j MET TOM (@heymrstark) August 12, 2018
Honestly just call us mom and dad. @ncentineo shot by the amazing @emmanmontalvan
A post shared by @ lanacondor on Aug 27, 2018 at 1:42pm PDT
ဒီတော့ သူတို့နှစ်ယောက် တကယ်ဒိတ်နေကြလားလို့တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ အသေအချာကိုမဟုတ်ပါဘူး။Lana Condor မှာချစ်သူရှိပြီးသားပါ။သူကတော့ မင်းသား Anthony De La Torre ပါ (ဂျက်စပဲရိုးအငယ်စားလေး)။သူက Noah နဲ့သူမရဲ့ ရင်းနှီးမှုကို နားလည်မှုအပြည့်ပေးထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး Lana က “သူက တကယ့်ကို ဘေးကနေ အားပေးနေတာပါ။ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြည့်အ၀လည်းသဘောကျနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မိသားစု အထူးသဖြင့်သူ့အစ်ကိုပေါ့။သူ့အစ်ကိုက ဒီဇာတ်ကား trailer ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ “ဟေး မင်းရဲ့ Trailer က အရမ်းမိုက်တယ်။ငါအရမ်းကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ မကြိုက်လည်းမကြိုက်ချင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ညီကလွဲပြီး မင်းကိုတစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့မမြင်ချင်ဘူး”ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့။Ship ချင်ရင်တောင် Ship လို့မရတော့ပါဘူးနော် 😅💕
Happy golden birthday, golden boy. You make me the happiest always 🤓💕
A post shared by @ lanacondor on Nov 24, 2017 at 11:21am PST
The nugget, I mean who couldn't love that face amirighttt?! 💌 #toalltheboysivelovedbefore @ncentineo
A post shared by @ lanacondor on Aug 4, 2017 at 11:05am PDT
Netflix ရဲ့ To All the Boys I’ve Loved Before (၂၀၁၈) ဇာတျကားကိုကွညျ့ပွီးတဲ့သူတိုငျး နောကျတဈခေါကျပွနျကွညျ့ခငျြအောငျ
ဆှဲဆောငျနိုငျတယျဆိုတာ ကွညျ့ပွီးတဲ့သူတိုငျးလကျခံကွမှာပါ။လူငယျဆနျဆနျအခဈြဒရာမာဇာတျကားလေးဖွဈလို့ ထပျခါထပျခါကွညျ့လညျး
မရိုးနိုငျပါဘူး။ဒီကွားထဲ မငျးသားနဲ့မငျးသမီးကလညျး နှဈယောကျလုံး လိုကျဖကျပွီးခဈြစရာကောငျးသူလေးတှေ။ဒီတော့ ပရိသတျတှကေ Ship ပွီပေါ့။
သူတို့အတှဲလေးကိုသဘောကလြို့ ပရိသတျတဈခြို့က သူတို့နှဈယောကျဟာ အပွငျမှာတကယျဒိတျနကွေတယျလို့ထငျရလောကျတဲ့သကျသတှေကေို
*ဒီဓာတျပုံထဲက Lara Jean ရဲ့ lock-screen လေးကိုမွငျရငျ ဟယျ ဒီအခနျးလေးမတှလေို့ကျဘူး၊ကြျောသှားတာထငျတယျလို့တှေးမိကွမှာပါ။ဒါပမေဲ့
ဒါက ရုပျရှငျထဲမှာပါတဲ့ဇာတျဝငျခနျးမဟုတျပါဘူးတဲ့။ဒါရိုကျတာ Susan Johnson က ဒီခဈြစရာအဖွဈအပကျြလေးကိုပွောပွခဲ့ပုံက “သူတို့နှဈယောကျက
အထကျတနျးကြောငျးသဖှယျပွငျဆငျထားတဲ့ အခနျးထဲမှာ ပုံထဲမှာတှရေ့တဲ့အတိုငျး တဈယောကျကိုတဈယောကျဖကျပွီး အိပျပြျောနကွေတာပါ။အဲ့ဒါနဲ့
အဖှဲ့သားတဈယောကျက သူတို့ပုံလေးကိုရိုကျလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။သူတို့ကိုအခုလိုတှရေ့တာ တကယျပဲလိုကျဖကျပွီးခဈြစရာကောငျးတယျလို့ထငျတယျ”ဆို
*ရုပျရှငျရိုကျနတေဲ့တဈခြိနျလုံး Noah က Lana Condor ကို ကြီစယျနတောပါတဲ့။ရုပျရှငျထဲမှာသူတို့နှဈယောကျစတှဲတဲ့အခြိနျ Lara ရဲ့ ဘောငျးဘီ
အိတျကပျထဲကိုလကျထညျ့ပွီး ကနျတငျးကိုလြှောကျလာကွတဲ့အခနျးကိုမှတျမိကွဦးမှာပါ။တကယျတော့ အဲ့ဒါက Noah (peter) ကွောငျ့ပါတဲ့။သူက
အဲ့ဒါကို အစမျးရိုကျနတေုနျးကြီစယျစနောကျခဲ့တာပါ။ဒါကို ဒါရိုကျတာက သဘောကကြာ မိုကျတယျဆိုပွီး သူတို့အစက ရိုကျမယျ့ဇာတျဝငျခနျးကိုပွောငျးလဲခဲ့တာပါ။
*PRESS TOUR မှာလညျး တဈယောကျကိုတဈယောကျကြီစယျနောကျပွောငျခဲ့ကွတာပါ။Third Wheel ကတော့ Israel Broussard ပေါ့ 😛 ။ဗီဒီယိုလေး
*Lana ကလညျး Noah ရဲ့ PICKUP LINES တှနေဲ့ အတျောကွီးကွညျနူးနတောမွငျတှရေ့မှာပါ။ဒိတျဖို့အတှကျ စကားလမျးကွောငျးခငျးတဲ့ပုံစံမြိုး
Noah နဲ့ Israel က Lana ကိုပွောတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ Lana က Noah ရဲ့ စကားတှကေို ပိုပွီးသဘောကတြာ မွငျနရေပါတယျ။Noah ရဲ့ 
“Do I know you? You lookalot like my next girlfriend.”ဆိုတဲ့စကားကွားတော့ ခကျြခငျြးကိုအမှတျ ၁ဝဝပေးလိုကျတာနျော။Israel လေး သနားပါတယျ
*နောကျတဈခကျြက Lana Condor ဟာ Naoh ကို အရပျရှညျပွီး ခနျ့ညားခြောမောတဲ့ယောကျြားလေးလို့ အငျတာဗြူးမှာပွောခဲ့ပါတယျ။ပွီးတော့”သူက အမွဲတမျးပြျောပြျောနတေတျပွီး စိတျသဘောထားကောငျးမှနျတဲ့သူတဈယောကျလို့ ကြှနျမထငျတယျ။ဒီတော့ သူ့ရဲ့တှဲဖကျမငျးသမီးအဖွဈလုပျဖို့ မခကျခဲပါဘူး။သူ့ကို တကယျကွီးအကွီးကွီး ခရကျရျှနတောပါ။ပွီးတော့ သူလညျး ကြှနျမကိုခရကျရျှနတေယျလို့တှေးရတာလညျးကွိုကျပါတယျ”ဆိုပွီးပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ပွီးတော့ Noah ကလညျး Lana ကို “love of his life” လို့ချေါထားတာတှရေ့ပါတယျ။သူမရဲ့မကျြနှာခဈြဖို့ကောငျးတဲ့အကွောငျးပွောနတောလညျးမရပျတော့ပါဘူးတဲ့။ကဲ ဘယျသူက သူတို့ကို မ Ship ခငျြပဲနမေလဲ
*နှဈယောကျလုံးရဲ့ အငျစတာဂရမျနောကျခံဘကျဂရောငျးကလညျးအတူတူပါပဲ။ဆငျတူပေါ့။ပွီးတော့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ မနျးရှငျးချေါပွီး
ဒီတော့ သူတို့နှဈယောကျ တကယျဒိတျနကွေလားလို့တှေးမိပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့ အသအေခြာကိုမဟုတျပါဘူး။Lana Condor မှာ
ခဈြသူရှိပွီးသားပါ။သူကတော့ မငျးသား Anthony De La Torre ပါ (ဂကျြစပဲရိုးအငယျစားလေး)။သူက Noah နဲ့သူမရဲ့ ရငျးနှီးမှုကို နားလညျမှုအပွညျ့ပေးထားသူ
တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ဒီဇာတျကားနဲ့ပတျသကျပွီး Lana က “သူက တကယျ့ကို ဘေးကနေ အားပေးနတောပါ။ပွီးတော့ဒီဇာတျကားနဲ့ပတျသကျပွီး
တော့ အပွညျ့အဝလညျးသဘောကနြှဈသကျပါတယျ။ဒါပမေဲ့သူ့မိသားစု အထူးသဖွငျ့သူ့အဈကိုပေါ့။သူ့အဈကိုက ဒီဇာတျကား trailer ကွညျ့ပွီး
နောကျတဈရကျမှာ “ဟေး မငျးရဲ့ Trailer က အရမျးမိုကျတယျ။ငါအရမျးကွိုကျတယျ။ဒါပမေဲ့ မကွိုကျလညျးမကွိုကျခငျြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့
ငါ့ညီကလှဲပွီး မငျးကိုတဈခွားတဈယောကျနဲ့မမွငျခငျြဘူး”ဆိုပွီးပွောခဲ့ပါတယျတဲ့။Shin ခငျြတာတောငျ မ Ship ရတော့ပါဘူးနျော။
Posted in Hollywood, Movies, News
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်ရင် ယောက်ျားတွေဘယ်အရာကို အဓိကထား ကြည့်လဲ?
သူ့ကို တကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် ဒီလိုအရာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်..🧡